Adolf Hitler ahaa khudaar ah | Apg29
Preschool doonayaan in ay "badbaadiyo cimilada" by dhammaan carruurta in la cuno khudaar.
Waxaan u maleeyay oo ku saabsan arrintan la Adolf Hitler markii aan akhriyey in uu jiro kindergarten ah ee waqooyiga Sweden kuwaas oo doonaya in ay "badbaadiyo cimilada" by dhammaan carruurta in la cuno khudaar. Maxaa dhacaya?
"Hilibka Qaar ka mid ah ma ahaa, maxaa yeelay, Hitler ahaa khudaar ah. Cuntada wanaagsan tahay, aad u wanaagsan, lakiin marnaba u raaxaysan karo."
Tani waxay fasireysaa mid ka mid ah Hitler provsmakerska Margot Wölk in badbaaday dagaalkii labaad ee dunida. On suxuunta Hitler waxay ahaayeen khudaarta, suugada, suxuunta baasto dheer ah iyo miraha qalaad.
Hitler qorshaha cunto dagaal u
Waxaa jira fikrado kala duwan oo sababta Hitler ahaa khudaar ah. Waxaa laga yaabaa in ay ahayd sababta oo ah sababo caafimaad sababtoo ah waxa uu lahaa dhibaato uu caloosha.
Si aad u qor Joseph Goebbels in uu xasuus qor, April 26, 1942:
"Qayb badan oo ka mid ah wada hadalka Nagi hogaamiyaha su'aasha iyo khudrada. Isagu waa ka badan qanacsanahay badan abid cunidda hilibka in uu yahay mid waxyeello u ah aadanaha. Dabcan, waa uu ogyahay in inta lagu jiro dagaalka waxba kama bedeli karo sahayda cuntada asal ahaan. Laakiin ka dib markii dagaalka, inuu doonayo inuu la tacaali. Waxaa laga yaabaa in uu xaq u leeyahay. "
Waxaan u maleeyay oo ku saabsan arrintan la Adolf Hitler markii aan akhriyey in uu jiro kindergarten ah ee waqooyiga Sweden kuwaas oo doonaya in ay "badbaadiyo cimilada" by dhammaan carruurta in la cuno khudaar . Maxaa dhacaya?
Cuntada dhamaanteed daahiriyeen
In Kitaabka Quduuska ah aad u hesho in ay cunaan cunto cayn kasta. Waxaa ka Reebban lahayn. u badan tahay in ay jirto dhibaato jirin, waayo, cimilada nooca cuntada aynu cuno toona, laakiin waxaa jira dhibaatooyin kale oo ku filan. By habka, cuntada oo dhan jirkaaga daahiriyo aawadeed, oo Ciise qudhiisa u sheegay in.
Mark 7:18. Markaasuu wuxuu ku yidhi [Ciise] wuxuu iyagii ku: Sidaas oo kale idinkuna garaadla'dihiin? Ha aad fahamto waxba soo socda meel ka baxsan uga galaan nijaasayn karaa? 19. Waayo, ma tegi qalbigiisa laakiin caloosha, kaas oo cuntada oo dhan lagu daahiriyaa oo uu leeyahay ay dhamaadka dabiiciga ah.
Mid ka mid ah wax muhiim ah
Waxaa intaa dheer, waxaa sidoo kale this jeclaan ee Kitaabka Quduuska ah:
Falimaha Rasuullada 15:28. Waayo, Ruuxa Quduuska ah iyo waxaan go'aansanay inaanan idin saarin culaab ka weyn marka laga reebo taasi lagama maarmaan:
Sababaha Is this aan jeclahay oo ku saabsan waxa ay tahay mid waxtar leh oo aan waxtar lahayn: Cun wax kasta oo si dhexdhexaad ah waxa laga yaabaa inay noqon doonto dhibaato lahayn.
Maxaa raaxo this ina siinayaa. Annagu ma heli qayb badan oo ka mid ah sharciyada iyo gacanta ku si ay u badbaadaan. Waxa kaliya mid muhiim ah iyo in uu yahay in ay aqbalaan Ciise oo aanay u badbaadin.
Waxaan mar akhriyo oo ku saabsan dhakhtar cabbay laba litir oo casiir karooto maalin sababta oo ah waxay waxtar leh u noqon lahaa. Wuxuu u dhintay cirrhosis of beerka ma xamili waayay miirey wax badan maalin kasta.
Tani waxay la cimilada u muuqdaan Qiyaanada ah in la xakameeyo dadka. Waa maxay nooca ajandaha waa run ahaantii ka dambeeya? Ma in ugu dambeyntii ay awoodaan in ay ku riday ka gees ah carshiga?
looma baahna in aad ka cabsan waxaad cuni, oo aadan u baahnayn in leennahay niyo xun. Cuna oo wanaag dareento. Ha ku dhicin ee dacaayad ah in yimaado siyaabo kala duwan si ay u maareeyaan oo la xakameeyo nolosha. dacaayad noocan oo kale ah waa badan oo cad oo wakhtiga in aan hadda ku nool yihiin noqdo. Waa calaamad ka mid ah waqtiyada.
Waxa kaliya in uu yahay waxa ugu muhiimsan oo la taaban karo ee noloshaada waa in aad aqbasho Ciise Masiix iyo badbaadi!
Rome 14:17. Waayo, boqortooyada Ilaah ma aha cunid iyo cabbid laakiinse waa xaqnimada iyo nabadda iyo farxadda ku jira Ruuxa Quduuska ah.